ADSS kuturika kiramba D8 akagadzirirwa kuturika kumativi ADSS internet optic wire kana kusiya waya waya muna FTTX kuvakwa. ADSS kuturika kiramba D8 ndiye dielectric ndikarangarira makomba pamusoro nzira pamwe pamakona <20, uye pfupi zvaiva anosvika 100 mm.
Dielectric ADSS suspension clamp is very easy for installation, and it does not require additional tools. This type of ADSS kuturika kiramba us handily adjusted plastic loop allows simple installation on cross-arm or suspension brackets and FTTH zvokukochekera, as well.
Suspension kiramba D8 ane neoprene dzisimbe kuti waya diameters 8-12 mm uye 12-16 neMM, inotaura zvakawanda dzakakurumbira neeSultan ose panhongonya ADSS netambo. The ruoko kupa kwazvo kuomerera pamwe waya uye inishuwarenzi chakavimbika Kuda kutamba uye refu.
Zvinhu: UV nemishonga thermoplastic, PVC.
ADSS kuturika kiramba
Dielectric ADSS kuturika kiramba
Suspension kiramba D8